Kabo tale isku bedelay Xildhibaan goortii xilka laga qaadayna ku laabtay kabo tolistiisa | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Kabo tale isku bedelay Xildhibaan goortii xilka laga qaadayna ku laabtay kabo tolistiisa
Inkastoo adduunyadu tahay mid marba meel ay kula galeyso nolosha ayaa waxaa hadana bani’aadamku yahay mid nafta ku raali galinaayo in mar un uu ka bixi doono nolosha qaraaran oo uu ku jiro.
Nolosha bani’aadamka ayaa ah laba qeyb wadada koowaad inuuu maro nolol mugdi ah taasi oo uu ku arkaayo caqabado badan oo lasoo darista noloshiisa, halka nolosha labaad uu galaayo mid taasi ka rajo roon oo uu la kulmaayo nolol wanaagsan oo farxad galinkarta noloshiisa.
Waxaa jira kumanaan ruux oo heysta shahaado muujineysa heerka uu gaarsiisan yahay aqoontiisa, balse la kulma nolol qaraaran oo meesha ka saareysa inuu heysto aqoon.
Cabdi Cawl waxa uu hore u lahaa xirfad ah inuu ka shaqeeyo kabo tolista, laakiin wuxuu hore u gaaray martabad ah inuu noqdo siyaasi ka mid ah siyaasiyiinta heer gobol ee Maamulka Somaliland. Isaga oo muddo toban sannadood ah hawshaas ku jiray.
Cabdi Cawl waxa uu ka mid noqday golayaashii deegaanka ee u horeeyey ee dadka reer Somaliland codkooda ku soo doortaan 15-kii December ee sanadkii 2002-dii, isaga oo urur siyasadeedkii Asad uga soo baxay golaha deegaanka ee degmada Borama.
Inta uusan noqon Xildhibaanka waxa uu ahaa Kabo tale can ka ah Magaalada Boorame waxa uuna aad uga qanacsanaa hoshiisa uu ka heli jiray nolol maalmeedkiisa.
Cabdi Cawl goortii ay soo idlaatay xilkiisii Xildhibaanimo waxa uu dib ugu laabtay Shaqadiisii Kabo tolista isaga oo raali ku ah inuu dib ugu laabto ayuu inta badan dadka uga warami jiray sida uu ugu qanacsan yahay dib ugu laabashadiisa Kabo tolista.
Waxaa xusid mudan in Cabdi Cawl uu heysto darajo waxbarsho waxa uuuna gaaray heerka dugsiga sare oo uu dhameeyay.
Reerkiisa waxa ay dhaqan u leeyihiin shaqada ah kabo tolista, waxaana haatan uu kabaha ku tolaa bartamaha magaaladda Boorama taas oo uu nolol maalimeedkiisa ka soo saarto.
Dhamaan arrintaani ayaa waxa ay ka turjumeysaa in aadanaha uu mar waliba yahay mid ku qanacsan waxa uu xirfada u leeyahay loona baahan yahay in qofka uu ku sabro shaqadiisa.